Usesulile okhulumela i-ANC ephalamende | News24
Usesulile okhulumela i-ANC ephalamende
Cape Town – Usesulile esikhundleni lowo obekhulumela iqembu elibusayo, i-ANC, ephalamende, uMoloto Mothapo, kubika iCity Press.
ICity Press idalule ukuthi uMothapo uzojoyina iphalamende njengomkhulumeli omusha wephalamende ngomhlaka-15 kuFebhuwari.
UMothapo akafunanga ukuphawula ngalezi zindaba ngesikhathi ethintwa yiCity Press kodwa imithombo yeCity Press idalule ukuthi uzongena esikhaleni esavuleka ngokushiya kukaLuzuko Jacobs, obekhulumela iphalamende noshiye ngoDisemba.
UMothapo ubelokhu ekhulumela ikhokhasi ye-ANC ephalamende futhi usesebenze ngaphansi kosotswebhu be-ANC abangu-7 kusukela ngonyaka ka-2005 kanti ngaphezu kwalokho wayesebenza ehhovisi lezolwazi leCosatu.
Ihhovisi likasotswebhu we-ANC likuqinisekisile ukusula kukaMothapo ngoLwesithathu ntambama.